Qaybsanka isbahaysiga Asmara Iyo saamaynta uu ku yeelan karo shirka Jabuuti
Waraysi uu Prof. Ibrahim Cadow -oo u hadlayay ururka midowga maxkamaduhu- bixiyay taariikhdu markay ahayd 18/07/2008 ayuu ku sheegay in khilaafadkii u dhaxeeyay xubnaha sarsare ee maxkamadaha ee ku saabsanaa heshiiskii Jabuuti la xaliyay. Laakiin, maalintaas maalintii ku xigtayba waxa muuqatay in aanu heshiiskaasi lugo ku taagnayn. Koooxdii isbahysiga ee ay xaruuntoodu ahayd Jabuuti waxa ay halkaas ka fureen shirkoodii golaha dhaxe kaas oo ay ku ansixiyeen heshiiskii Jabuuti. Sidoo kale qaybtii Isbahaysiga ee ay Asmari xaruunta u ahayd iyaguna waxa ay halkaas ka fureen shirkoodii golaha dhexe. Tariikhdu markay ahayd 22/07/2008 ayaana shirkaas lagu go’aamiyay in la casilay madaxdii isbahaysiga, isla markaana Asmara lagu doortay madax cusub oo Isbahaysigan hogaamisa. Dhacdooyinkani waxa ay markhaati u yihiin in uu burburay isbahysigii Asmara. Hadaba waa muhiim In la is waydiiyo maxaa sababay burburka Isbahysiga Asmara? Sidoo kale, iyana waa in la is waydiiyaa raadadka uu burburkani ku yeelan karo heshiiska Jabuuti? Jawaabaha su’aalahaas ayaan hadii Alle yidhaahdo ku eegi doonaa maqaalkan.
Qaybasanaanta Fikirka wadaada Isbahaysiga
Ururkii maxaakiimta waxa ku midoobay wadaado uu fikirkooda siyaasiga ahi kala duwanaa. Qolo ka mida qolooyinkii ku midoobay Maxkamaduhu (Al-shabaab) bilowgiiba waa ay diideen in ay ka qaybgalaan dhismaha isbahaysiga Asmara iyaga oo diidmadooda sabab uga dhigay in aanay waxba la wadaagayn dad aan aaminsanayn in xalku uu yahay diinta Islaamka - ama sida ay u dhigeen dad cilmaamiyiin ah. Wadaadadii ka qaybgalay dhismaha Isbahaysigan laftigoodu isku si umay wada fakirayn oo waxa ay kala matalayeen fikiro kala duwan. Fikiradahaasina waxa ay saamayn ku yeesheen aragtiyaha siyaasiga ah ee culimadaas. Intii ka horaysay shirkii Jabuuti lama dareemayn inta uu le’gyahay khilaafka fikirka siyaasiga ah ee wadaada isbahysiga ku jiraa, laakiin wixii ka danbeeyay shirkaas waxa soo if baxay in uu jiro khilaaf wayn oo fikriya oo u dhaxeeya wadaada xubnaha ka ahaa isbhaysigan. Arimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafsan yihiin waxa ugu wayn: qaabka loo saarayo ciidanka Itoobiyaanka, doorka qaramada midoobay ee xalka dhibaatada Soomaalida, wadahadalada lala galayo dawlada ku meel gaadhka ah iyo sharciyadeeda, doorka ay mustaqbalka wadaadadu ku yeelanayaan nidaamka siyaasiga ah ee Soomaalida. Hadii aad akhrido fatwooyinka iyo mawaaqifta wadaada ku jira Isbahaysiga Asmarana waxa cad in arimahaas ay wadaadadu aad ugu kala tagsan yihiin. Shirkii Yamen ujeedada laga laga lahaa waxay ahayd in arimahaas lagu xaliyo ama ugu yaraan aragtiyaha la isu soo dhaweeyo. Ma muuqato in arinkaas lagu guulaystay iyo in ay qolana ka tanaasushay fikirkeedii. Tanina waxa ay ASAAS u tahay qaybsanka ku dhacay isbahaysigii Asmara.
Dumuuxaadka Siyaasiyiinta Asmara
In badan oo ka mida xubnaha Isbahaysiga Asmari waa siyaasiyiin leh hami siyaasadeed. Qaar ka mida siyaasiyiintani waxa ay u arkeen shirkii Jabuuti mid carqalad ku noqon kara hamigooda siyaasadeed. Tani waxa ay keentay in ay aad u mucaaradaan heshiiskan iyo intii ka qaybgashay ee ka midka ahayd isbahaysigooda. Qolooyinkan, khilaafadka Ibahaysiga ee (ka dhashay ka qayb galka iyo go’aamadii) shirkii Jabuuti waxa ay u noqdeen fursad ay ku gaadhi karaan hamigoodaa siyaasadeed. Iyaga oo hadaba ka faa’idaysanaya daldaloolada go’aamadii shirkii Jabuuti ayay sii balaadhiyeen is afgarnwaagii u dhaxeeyay xubnaha isbahaysiga ee ku saabsanaa shirka Jabuuti kaas oo hadii si degan looga wada hadli lahaa xal macquul ah laga gaadhi kari lahaa. Sidoo kale qolooyinkii ka qaybgalay shirka Jabuuti ee isbahysiga ka tirsanaa qaabka ay u maamuleen ka qaybgalkooda shirkaasi waxa uu isna door ka ciyaaray khilaafka isbahaysiga.
Soomaaliya Soomaali kaliyi kuma hirdamayso. Siraaca Soomaliya ka jirana waxa ku jira quwado badan oo aan Soomaali ahayn. Quwadahaas qaarkood dantoodu kuma jirto in ay ay Soomaalidu heshiis iyo nabad helaan, waxaanay markasta isku dayaan in ay hogaanka Soomaalida ka fogeeyaan kuwa ay iyagu markaas u arkayaan in aanay dantooda matalayn. Qawadahan qaarkood midnimada iyo wadashqaynta Isbahaysiga Asmara waxa ay u arkeen in ay khatar ku noqon karto dantooda khaasatan hadii hashiis ay ku midaysan yihiin la galaan dawalda ku meelgaadhka ah. Gacan ajnabi ahi kama maqana khilaafaadkan qaybiyay isbahaysiga Asmara.
Saamaynta Burburka Isbahysiga ee Shirka Jabuuti
Isbahaysigu waxa uu ka kooban yahay qayb dibada joogta oo siyaasiyiin ah iyo qayb qori sidata oo gudaha ka dagaalamaysa. Heshiiska Jabuuti mustaqbalkiisu waxa uu ku xidhanaa doonaan mawaaqifta qolooyinka gudaha ka dagaalamaya. Kala Jabka siyaasiyiinta Asmara ee dibada joogtaa saamayn wayn kuma yeelan doono heshiiska Jabuuti hadii ay qolooyinka gudaha ka daagaalamayaa taageeraan heshiiskan isla markaana uu heshiiskaasi dhaliyo in Xabashidu ay ka baxdo Soomaaliya. Hadiise qolooyinka guduhu ay diidaan heshiiskan Jabuuti amaba hadii uu heshiiskani natiijo dhakhsa ah dhalin waayo, taasi waxay ay noqon doontaa dhamaadkii heshiiskaas waxaana Soomaalida u furmi doona safxad kale oo aan la saadaalin karin sida ay u eekaan doonto. Wuxuun baase la hubaa in dagaalku uu sii socon doono iyo in wareerka (tiiha) siyaasadeed ee Soomaalidu uu sidiisa ahaan doono.
Midnimada Isbahaysiga iyo in ay isbahaysigu si waaqiciya ku waajahaan siyaasada Soomaalida ee sabaynaysa waxa ku jirta danta Soomaalida. Isbahsyigan dad badan ayaa taageeray iyaga oo u arkayay in uu qayb ka noqon karo xalka mushkilada Soomaalida. Doorkaasna ma ciyaari karo isbahaysigu hadii aanay hogaamiyayaashoodu aragti dheer u yeelan waaqica muragsan ee Soomaalida isla markaasna ayna joojin isjiid jiidka dhexdooda. Shirka Jabuuti waxa uu ahaa shax siyaasadeed oo la doonayay in ay isbahaysigu is wada jir ah u ciyaaraan. Way ku fashilmeen taas laakiin waxa ay wali haystaan fursad waase hadii ay ka faa’idaystaan fursadaas dareemaan culayska iyo masuulyada saaran. Isbahaysigu waa in ay mushkiladaha daakhilkooda dhakhso u xaliyaan. Taasi waa rajada in badan oo danaynaysa xalka mushkilada Soomaalida. Taariikhdu ma ilaawi doonto hogaanka isbahaysiga hadii ay sidaa yeeli waayaan.